13. März 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Magac bixinti Djibouti Ayaa u Sahantagey?
Djabuutiyeey waxaa tahay dadku meel u jecel yahoow loo wada jibootee jiridaan go,ayne badda johooradeeday dadka kii ku jecel iyo ubadkaaga soo jiroo.
Eriyadda amaanta qaradda weyn ku hagoogan waxay ka mid ahayeen hees magaalada Djibouti u ugu heesay abwaanka weyn ee Aaden Faarax Samatar oo qarnigi aan ka soo gudubnay masgaxdiisa iyo maankiisa ka soo maxaatay, wayna u qalantaa in amaanta Djibouti mugweyn meel iyo meqaam sare lagu saaro.
Qormaddana ka hadli mayso magaca Djibouti iyo qiimaha u leeyahay haseeyeeshee bal waxaan isla eegi doona maxaa keentay in dalka Djibouti iyo caasimaddiisa Djibouti ay isku hal magac yeeshaan iyadoo aan wada ognahay in mandeqada ay ku taal maanta Djibouti ay lahaan jirtay asal iyo isir taarrikheed facweyn ahaydna in qaar ka mid ah lagu maamuuso magacdaa oo la soo nooleeyo haydna fursad seegtay ciddi dalka Djibouti iyo caasimaddiisa hal magac wadaajisay aanu garan maayo goorti iyo goobti lagu go,aanshay in dalka Djibouti loo baxsho magac ah (la republique de Djibouti) waxayse ku qurux badnayd in ay dawladda Djibouti dadkeega daboolka uga qaado in ay duruufi ku qasabtay iyo in ay iyagoo u madaxbanaan ay magacaa jeclaadeen sidaana ugu sahan tageen.
Magaca Djibouti wuxuu soo shaac baxay oo meel lagu qoray sannadihii 1857kii markii ay sahamiyayaashi reer yurub ee guumeystaha horseedka u ahaa salka soo dhigeen xeebaha badda cas waxay walibaa meel lagu nasto u ahayd awrti safarka ahayd ee u kala gooshi jirtay magaalooyinka Saylac iyo Tadjaurah oo iyaguu ahaa labo magaalo oo gumeystaha hortood jiray ama dhisnaa micnaha magaca Djibouti ma jirto cid si cad oo daliil iyo cadaymo wadato kuu sheegi karta marka laga reebo sheekooyin iyo sheegashooyin mala awaal ah oo dadka reer Djibouti ku mirqaamaan oo sadexda(3) af ee looga hadlo sida soomaaliga,canfarta,iyo carabiga, mid walba meel gaar ah ula galab caraabo,tusaale ahaan;canfartu waxay ku sheegaan magaca Djibouti in u ka yimid HIBUUTI oo la micne ah DHARIGAYGII ,soomaaliduna waxay sheegaan JABUTII oo ah meel xayawaan dila ah oo BUTI la odhan jiray dagaal lagula galay ka dibna lagu jabiyeey ,Carabtuna waxay leeyihiin arrin intaaba ka duwan oo ah JAA,BUUT oo ah markabkii u yimid.
Siday doontaba ha ahaatee sheegashooyinka iska wada hor iman marna kuma qorno wixii ay reer Yurub ku arkeen dhulkii u dhaxayn jiray Saylac iyo Tadjaurah ee ay awrti ciisaha iyo Dabinadu markay soo kiraystaan ku safri jireen Djibouti waxaa waaga ka magac weynayd AMBADO oo ahayd goob u dhaxayn jirtay Ciisaha iyo Danakiilada Djiboutina waxay ku sheegeen in u ku ooli jiray ceel biyo macaan iyo xeeb dhooqo iyo dhoobo fara badan lahayd markay biyaha baddu ka caaridaan magaca Djiboutina waxay u qoreen DJIBOUTIL ama JIBOUTIL oo waxay ku dareen xarafka L dabcan ma odhan karno gaalka awrka kiraystay ayaa magaca bixiyaay laakiin waxaan odhan karna waa sidii loogu sheegay uunbu isna u qoray waxana dhulka kala bari jiray dadkii degaanka een soo sheegnay in ay ku kulmi jireen
AMBADO waxana dadka loogu yeedhi jiray ABAAN waana waxaa maanta afka qaalad loo yaqaan GUID hadaba haddii abaankii dhulka kala yaqaanay waaga DJIBOUTIL ku sheegay waxaa is weydin mudaan goormay timid Djiboutidan iyo macnahaan qolaba meel ula yaacday?
Tusaale ahaan carabta reer Djibouti waxay leedahay JAA,BUUT meel dadba deganayn oo awrkiiba raf iyo rafaad ku maray halku ka iman karaa markab iyo wax la mid ah? Waa suaal u baahan in wax la iska waydiiyo !!!!
Halkaas waxaa ku cadaan karaa sheegoyinkii mala awaalka aha qaar kood in ay masgaxda caafimaadka qabta marna qaabili karayn geesta kale anigaa ogaankay ma aqaan wax af soomaliga lagu yidhaahdo JIBOUTIL ama Djiboutil canfarta iyo carabtana han ka war sugno.
In sahanka loo diray magac bixinta dalka Djibouti ay ka seexdeen ama ka ilduufeen waxaan ku arki karna bal waxaa magac taarrikheed ku yaala dhulkeena Djibouti ay qayb ka hayd han isha soo marino iyo magacadii loo bixin lahaa waxay kala ahaayeen;
1 Jamhuuriyadda geeska afrika=la republique Corne de l,afrique,caasimada- Djibouti
2 – badda cas=la republique de la Mer rouge, caasimada -Djibouti
3 -bab al mandeeb= la rep Bab al Mandeeb, Caasimada-Djibouti
4 – Pount=la rep de Pount ,Caasimada-Djibouti,
5 – Awdal=la rep d,Awdal, Caasimada- Djibouti,
6 -Ifat=la rep D,ifat –Caasimada-Djibouti
7 -Bariga Afrika=la rep Afrique de l,est-Caasimada-Djibouti.
Magacdaas waxay ka mid ahaayeen magacdii lagu maamuusi lahaa jamhuuriyadda Djibouti haddi si xeeldheer loogu sahan tagi lahaa oo waagaas ma jirin cid la baxday inkastooy maanta ay jiraan gobola soomaaliyaa ka tirsan oo qaar kood magac goboleed uqaateen waanaan ku faraxasanay soo noolaynta ay soo nooleeyeen raadkii iyo magacdii la odhan jiray dhulkeena laakiin ay Djibouti seegtay.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdda awrba awrka ka horeeyaa ayuu socokiisa leeyahay waxaa kaloo ay soomaalidu ku maahmaahdaa qurankii alifka ka xumaadda al Baqara kama hagaago.
Marba haddi magaaladi Djibouti iyo dalkiiba farsama xumo iyo aqoon daro is biirsaday awgeed loo baxshay hal magac waxaa mar kale is weydiin mudan maxay Djiboutina sii dhashay maanta?
Waxay sii dhashay 5 gobol oo kala ah;
5.iyo kan ugu da,da yar ee Arta,
oo dhamaantood ama 4 kamid ahi mid walba leeyahay sabab aan la aqoon labo magac iyo wax ka badan tussale;
1-Gobolka- cali-sabiix wuxuu leeyahay 3 magac oo kala ah;
Hadaba maxaa u diiday in loogu wan qalo gobolka Casa-Joog caasimadiisuna waa CaliSabiix?
2- Gobolka-Dikhil wuxuu isna leeyahay labo magac oo kala ah;
maxaa diiday in isna loogu wan qalo gobolka COOKAAR caasimadiisuna waa DIKHIL?
3-Gobolka Tadjourah ama magaalada Tadjourah waxay leedahay 4 magac oo kala ah;
ville 7 mosques,
Tadjaurah iyo Mabla,
Maxa diiday in Afartaa magac mid ka mid ah gobolka loogu sadqeeyo gobolka Mabla magaalada madaxdiisa Tadjourah?
4- Gobolka Obock oo ah gobolka ugu da,weyn goboladda dalka marka laga duulu soo galitaanki gumeystha isna wuxuu leeyahay labo magac oo kala ah;
Soow ma qurux badnayn in sidii kuwi aan soo sheegnay la kala saaro magaca magaala madaxda iyo tan gobolka oo loogu yeedho;Gobolka OBOCK iyo caasimaddiisa XAYUU ?
Ugu dambeyn gobolka ugu da,yar ee ARTA isna waxaa ku taal laba meelood oo caan ah kuna habboon in la xuso sidaa buurta UGUL iyo goobtii caan baxday ee AMBADO oo ahayd goobti lagu kala saxeexday heshiiskii Fransiiska iyo ciisaha dhex maray waxaan ku talin lahayn in gobolka loogu magac daro
iyo magaala madaxdiisa ARTA.
Tala xumaddi dalka iyo magaala madaxdiisa isku hal magac ka dhigtay sannadkii 1977kii wali lagama talaabsan ma jirto dawlad iyo dadweyne ku baraarugsan in magac iyo taarrikha dahab ahi inaga aasan yihiin illa maanta masgaxda iyo maanka ummadda reer Djiboutina wali kuma soo degin in ay dalka iyaguu leeyihiin wixii ay rabana ka badalli karan waxna ku soo kordhin karaan waxayna ku faraxanyihiin place Minelik,Place Lagard,iyo place Rambow.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/Djibouti-karte.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-03-13 23:02:362017-03-13 23:02:36Diiradda XeerNews24.com
Bio injineer Mahad Abiib oo warbaahinta la hadlay. Wararkii ugu dambeeyay Arrimaha Golaha Wasiirada iyo Shaxda Wasiirada maamulada...